सिक्किम पुगे सौगात र अनुप, भारतिय अभिनेत्रीसँग रोमान्स « फिल्मी नेपाल
सिक्किम पुगे सौगात र अनुप, भारतिय अभिनेत्रीसँग रोमान्स
Published On : 22 March, 2021 2:21 pm
By : फिल्मी नेपाल
भर्सटाइल अभिनेता द्वय सौगात मल्ल र अनुपबिक्रम शाही नेपाली पर्दामा तेश्रो पटक एकसाथ देखिने भएका छन् । सम्पुर्ण छायांकन सिक्किममा हुने फिल्म ‘जार’को लागी दुई अभिनेता यतिबेला छायांकन स्थल पुगिसकेका छन् ।
सन् १८ सयको दशक अन्त्यतिर सिक्किमेली समाजमा घटेको एक यथार्थ घटनामा आधारित रहेर फिल्म बन्न लागेको निर्माण टिमले बताएको छ । सत्यकथामा बोल्ने यो फिल्ममा सौगात र अनुपसँगै गिताञ्जली थापा लिड अभिनयमा रहनेछिन् । भारतिय अभिनेत्री थापाले भारतमा रहेर विभिन्न आधा दर्जनबढि फिल्महरुमा काम गरिसकेकी छिन् ।
फुर्वा छिरिङ लामाले निर्देशन गर्ने यो फिल्मको छायांकन यहि मार्च २५ बाट पश्चिम सिक्किममा सुरु हुनेछ । अर्को बर्षको दशैं, तिहारलाई प्रदर्शन तार्गेट गरिएको फिल्मको छायांकन अवधि २० दिन राखिएको निर्माण टिमले बताएको छ । ‘जार’ इन्द्र बहादुर राईको लेखनमा बन्न लागेको हो । फिल्मको छायांकनदेखि सम्पादनसम्म सबै भारतिय प्राविधिक संलग्न हुनेछन् ।
पत्रकार महासंघ एसोसिएट प्रदेश अध्यक्षमा बैकुण्ठराज पराजुली विजयी
नेपाल पत्रकार महासंघको एसोसिएट प्रदेशको अध्यक्षमा फिल्मीनेपाल डटकमका सम्पादक बैकुण्ठराज पराजुली विजयी भएका छन् ।
कोभिड महामारीलाई फिल्मकर्मीले सिकाइको रुपमा लिनुपर्छः धिरेन शाक्य
दाङ । अभिनेता धिरेन शाक्यले दाङ जिल्लालाई चलचित्र नगरीको रुपमा विकास गर्न सकिने थुप्रै सम्भावना
फिल्म ‘लम्फू’बाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू गरेका अभिनेता हुन् कवीर खड्का । नेपाली रजतपटमा स्थापित अभिनेता
‘लोभीपापी’मा जुरेलीको बोल्ड ठूम्का |भिडियो
फिल्म ‘लोभीपापी’को ‘डार्लिङ’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा रिना तिमिल्सिना र ओम सुनारको
स्मिताको स्वरमा 'म त छोरी नेपाली' |भिडियो
वेब सिरिज 'एरर्स अफ गड' फर्स्टलुक आउट
विश्वप्रकाशको संगीतमा छोरीलाई जब 'मिसले सोध्नु भो' !
विश्वप्रकाशको संगीतमा छोरीलाई जब ‘मिसले सोध्नु भो’ !
स्मिताको स्वरमा ‘म त छोरी नेपाली’ |भिडियो
वेब सिरिज ‘एरर्स अफ गड’ फर्स्टलुक आउट
अष्ट्रेलियाबाट सार्वजनिक भयो नेपाली ‘डन’
© 2021 फिल्मी नेपाल